Tag: outbound calls | Martech Zone
Mid ka mid ah astaamaha aan ku bilaabayno diiwaanka hay'adeena ayaa gujinaya si aad u wacdid. Dhawaanna, waxaan u kireysanay kaaliye dal-ku-gal ah hay'addeena. Waxa aan si xanuun leh ugu baraarugnay ayaa ah in rajooyinka qaarkood iyo ganacsatadu aysan si fudud ganacsi u sameyn karin ilaa ay taleefanka ka qabtaan oo ay diraan meheradda. Marka laga reebo helitaanka, arrinta kale ayaa si fudud ugu habboon. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa u isticmaalaya aaladaha mobilada baaritaanka iyo helitaanka meheradaha